हाडनाताकरणी कथा 2: मुक्त तातो परिवार अश्लील खेल
खेल्न #1 हाडनाताकरणी अश्लील अनलाइन खेल
नमस्कार त्यहाँ! स्वागत हाडनाताकरणी कथा 2. हाम्रो डेभलपर टीम काम गरिएको छ, विशेष गरी कठिन भन्दा पछिल्लो केही महिना सँगै राख्नु हाम्रो लागि शीर्षक रिलीज । हाडनाताकरणी कथा2पहिलो बन्द सुरु रूपमा एक विचार मा फिर्ता जुलाई 2015 को: यो अब अन्त राख्न समय अनलाइन यो लागि सारा विश्व गर्न आनन्द! If you ' re बिरामी र थकित वयस्क खेल बस छैन स्पट मारा, हामी जस्तो लाग्छ प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ छ सबै बारे प्रेम IS2. हामी विश्वास छ कि हाम्रो खेल को एक छ. यो मा सबै भन्दा राम्रो शैली र सानो शंका गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने नै बाटो महसुस जब तपाईं यो लोड गर्न को लागि माथि आफैलाई । , नोट अगाडी कि समय को साइन अप र यो खेल ठूलो परिवार-केन्द्रित सेक्स गेम शीर्षक चार्ज को पूर्ण मुक्त छ र कुनै डाउनलोड आवश्यक! हामी बुझ्न चिन्ता र इच्छा को आधुनिक उपभोक्ता, जो राख्नु भएको छ, हामीलाई मा एक प्रमुख स्थिति प्रदान गर्न जस्तै मान्छे तपाईं पहुँच गर्न विश्व-वर्ग खेल मजा । जहाँ अन्य शीर्षक छन् खसेको र प्रदान गर्न विफल, हामी छौं उठयो सुस्त र देख तपाईं प्रदान गर्न पहुँच को एक विशाल मात्रा संग ठोस, सेक्सी हाडनाताकरणी gameplay. तपाईं लिन सक्छ भनेर प्रतिज्ञा संग तपाईं गर्न बैंक पनि – बस खेल्न र आफैलाई लागि पत्ता!
हाम्रो ग्राफिक्स विभिन्न छन्
यो स्पष्ट भए को प्रारम्भिक भाग मा 2000s कि अश्लील खेल हुनेछ सधैं ग्रस्त सम्म गुणवत्ता ग्राफिक्स उपलब्ध थिए । देखि दृश्य तत्व को यी खेल त महत्त्वपूर्ण छ, हामी छु निवेश वरिपरि 50% को हाम्रो बजेट मा कलाकृति र इन्जिन डिजाइनर प्राप्त गर्न खेल हेर्दा उत्कृष्टता. हामी साँच्चै विश्वास रूपमा हाल कुराहरू खडा, हामी सबैभन्दा नेत्रहीन आकर्षक XXX शीर्षक मा बजार । यो, कि देखा थियो स्वरूप हो, सबै त हुनुहुन्छ भने देख लागि हाडनाताकरणी खेल मजा छ कि एक ठूलो स्लान्ट तिर दृश्य खुशी, हाडनाताकरणी कथा2यहाँ छ प्रदान गर्न भनेर अनुभव छ । , के अधिक छ, हामी प्रतिबद्ध छु आफूलाई अगाडि जा भनेर सुनिश्चित गर्न ग्राफिक्स सधैं नजर सम्म चलान र राम्रो मा कुनै पनि उपकरण । तपाईं पनि गर्न सक्छन् चलान हाडनाताकरणी कथा2मा एक मानक मोबाइल उपकरण तपाईं चाहनुहुन्छ भने – हाम्रो प्रविधि गर्न adapts GPU र CPU सेटिङ मा उड भनेर सबै सुनिश्चित गर्न ठूलो देखिन्छ कसरी कुनै कुरा तपाईं छौं आनन्दित हाम्रो खेल. ओह, र हामी हुनेछ लागू पैच मा एक नियमित आधार छौं सुनिश्चित गर्न पहुँच छ कि उत्कृष्टता अश्लील अनुभव मा एक खेल संसारमा तपाईं आशा गर्न आएको छु!
उपलब्धिहरू मा हाम्रो खेल
तपाईं हुनुहुन्छ भने कसैले रुचि जो एक लक्ष्य तिर काम गर्न छ, यो उपलब्धि प्रणाली मा हाडनाताकरणी कथा2पक्कै पनि बनाउन जा रहेको छ. तपाईं धेरै खुसी हुनेछ । सही, अब हामी 111 अद्वितीय उपलब्धिहरू लागि, तपाईं अनलक गर्न. केही धेरै सरल छन् – यस्तो सङ्कलन $100 – जबकि अरूलाई छन्, त्योभन्दा गाह्रो र प्रयास को एक धेरै आवश्यकता र ऊर्जा अनलक गर्न. हामी आशा छ कि यो संग प्रदान गर्नेछ एक अर्थमा replayability भन्ने हामी चाहन्छौं हाम्रो शीर्षक छ । तपाईं शीर्ष लिडरबोर्डमा को उपलब्धि? जसले कुनै एक खेलेको छ हाडनाताकरणी कथा2एकदम व्यवस्थित सबै 111 – तपाईं सक्छ धेरै राम्रो हुन पहिलो व्यक्तिगत, यो के गर्न!, याद गर्नुहोस् कि तपाईं प्रगति को रूप, खेल मार्फत उपलब्धि पनि हुनेछ अनलक को एक गुच्छा विशेष सुविधाहरू । यी समावेश सबै-नयाँ NPCs, अन्त्य storylines सुरु, स्थानहरू र अधिक. लाग्छ, उपलब्धिहरू को सिस्टम रूपमा भइरहेको राम्ररी एकीकृत संग खेल रूपमा यो बनाउन चुनौतीपूर्ण as possible. जबकि तपाईं मुक्त छौं बेवास्ता गर्न यी विकल्प को अग्रिम आफ्नो प्रगति मा उपलब्धिहरू क्षेत्र, यो शायद आफ्नो सबै भन्दा राम्रो गतिविधिलाई वास्तवमा तिनीहरूलाई एक कोशिश दिन.
बादल सेवाहरू मा IS2
हाडनाताकरणी कथा2चल्छ माध्यम सीधा आफ्नो ब्राउजर, this means that you ' ll always be जोडिएको हाम्रो केन्द्रीय सर्भर. फलस्वरूप, तपाईं जीत गर्न आवश्यक छैन म्यानुअल तरिकाले बचत कुनै पनि प्रगति (हुनत तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं अन्वेषण गर्न विभिन्न संवादको विकल्प) र खेल व्यवस्थापन हुनेछ सबै को तपाईं को लागि कि. यो पनि मतलब यदि तपाईं भूल बचत गर्न, तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन् jump सीधा फिर्ता कार्य मा खोने बिना आफ्नो प्रगति. बादल बचत समक्रमण भर सबै उपकरणहरू पनि, त्यसैले तपाईं के गर्न खेल मा, आफ्नो मोबाइल एक दिन र पीसी अर्को, तपाईं अझै पनि खेल हुन नै बचत., हामी निर्णय गर्न तल जाने यो बाटो कि सुनिश्चित गर्न तपाईं horny gamers कहिल्यै हुन कम गर्न को लागि तत्काल पहुँच सामग्री तपाईं खोजी । बादल खेल भविष्य छ – विशेष गरी वयस्क अन्तरिक्ष गर्दा मानिसहरू चाँडै नजिक आफ्नो ब्राउजर एक कारण वा अर्को लागि. हामी विचार को यो शैली खेल हुनुपर्छ मानक र गर्व को एक अग्रगामी स्टूडियो मा अन्तरिक्ष छ । प्रशस्त त्यहाँ थप कहाँ छ भन्ने आए पनि!
पूर्ण अनुकूलन मा हाडनाताकरणी कथा 2
अनुकूलन छ एउटा महत्त्वपूर्ण गुण, हाम्रो लागि किन जो छ हामी एक पूर्ण असामंजस्य सर्भर खण्ड – र उप-फोरम – समर्पित custom mods कि हाम्रो समुदाय सिर्जना भएको छ. हामी एक अत्यधिक राशि गर्न सक्छ कि उपकरण प्रयोग अनुकूलन गर्न आफ्नो स्थापना र कि वाहेक, तपाईं पाउन छौँ कि मान्छे प्रदान आफ्नै mods लागि तपाईं स्थापना गर्न र प्रयोग । धन्यवाद ब्याकइन्ड प्रणाली हामी, mods समक्रमण गर्न आफ्नो प्रोफाइल र सजिलो छ गर्न मा र बन्द के मा निर्भर अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ छ । , One of the most popular mods हामी क्षण मा अनुकूल वर्ण को एक – तपाईं शाब्दिक डिजाइन र कुनै पनि थप्न NPC तपाईं चाहनुहुन्छ मा आधारित आफ्नो सही आवश्यकताहरु! फैंसी भएको Riley Reid रूपमा आफ्नो कदम-बहिनी? कुनै मुद्दा! कसैले सिर्जना भएको छ कि एक उपकरण बनाउँछ यस गरिरहेको एक निरपेक्ष पार्क हिंड्न । हामी छौं पनि काम मा एक प्रणाली को अनुमति कस्टम quests हुन डिजाइन गर्नुपर्छ जो रिलीज अर्को केही महिना मा. यो एउटा रोमाञ्चक समय खेल्न हाडनाताकरणी कथा 2, पक्का लागि हो!
त्यसैले, तपाईं के प्रतीक्षा गर्दै? अब साइन अप र आनन्द सबै भन्दा राम्रो हाडनाताकरणी अश्लील खेल बजार प्रस्ताव छ! तपाईं निराश हुनेछैन संग आफ्नो अनुभव – त्यो एक ग्यारेन्टी! पढाइ लागि धन्यवाद र खुसी खेल.